Badda Sargasso, badda aan xeebta lahayn | Wararka Safarka
Taasi waa sax, Badda Sargasso waa badda kaliya ee aan laheyn xeebBiyihiisu ma qubeystaan ​​xeebta dal kasta oo qaarad ah. Ma ogeyd? Xaqiiqdii waad maqashay ama ka akhrisay banaanka, laakiin run ahaantii ma ogtahay Aaway o astaamaha ay leedahay mise kaliya maxaa sidaa loogu magacaabaa?
Maanta, maqaalkeennu wuxuu ku saabsan yahay Badda Sargasso, oo ah bad ay ka buuxaan algae sidoo kale waa badda kaliya ee lagu qeexo astaamaha jireed iyo nafley.
Marka hore, halkee ku yaal? Waa dhul ka mid ah Waqooyiga Badweynta Atlaantik, aad u ballaaran, ee qaab elliptical. Waxay ku taalaa inta udhaxeysa meridiyaanka 70º iyo 40º waxayna isbarbar dhigayaan 25º ilaa 35ºN, qeybta woqooyi ee Waqooyiga Atlantik.
Galbeedka Badda Sargasso waxay maamushaa Gacanka Dooxada, koonfurta dhanka Koonfurta Ikatoriyaalka Hadda iyo bariga dhanka Canary current wuxuuna ka kooban yahay wadar ahaan 5.2 milyan kiiloomitir oo laba jibbaarans, oo dhererkeedu dhan yahay 3.200 kiiloomitir iyo in ka yar 1.100 kiiloomitir oo ballac ah. Wax u eg seddex meelood laba meel badda, taas oo aan yareyn, ama saddex meelood meel meel dusha Mareykanka.
Waxaan ku sheegnay cinwaanka maqaalka in uu yahay badda kaliya ee aan lahayn xeebo qaaradeed wixii ka dambeeyay cufnaanta dhulka kaliya ee qurxisa booskaaga waa jasiiradaha Bermuda. Xaqiiqdii, waa halkan halka uu ku yaalo saddexagalka caanka ah ee Bermuda, qayb ahaan badda lafteeda, qaarna badda oo dhan.
Xaqiiqda xiisaha leh ayaa ah taas Waxaa la helay safarkii ugu horreeyay ee Christopher Columbus uu ku tago Ameerika qarnigii XNUMXaad, runtiina, isagu laftiisu wuxuu tilmaamayaa astaamaha gaarka ah ee badweyntaas oo aakhirkii ku dhammaaday magaceeda: qaar baaxad leh "Dhir cagaaran" oo aad ugu badnaa biyaha dhexdooda welina jira. Xaqiiqdii, maahan geedo laakiin waa algae, oo ah nooca 'macroalgae' ee loo yaqaan Sagarssum, sargassum.
Heerkulka diiran ee biyaha badaani waxay abuurtay meesha ugu wanaagsan ee algae ku tarmo iyo, duruufaha jira awgood oo qaab gaar ah u xira badda, algae waxay ku hareen gudaha, bartamaha dhexdiisa, badanaa waxay u maleeyaan a khatarta dhabta ah ee doonta. Waa in mararka qaarkood ay jiraan "xoolo" dhab ah oo algae ah.!
Magaca waxaa bixiyay bad-mareenadii Burtuqiiska, waxay baabtiisay baalasha badda iyo badda labadaba. Waqtigaas dalxiisayaashu waxay moodeen inay tahay algae cufan oo mararka qaar gaabiya doomaha shiraaca, laakiin maanta waxaa la ogyahay in sababta dhabta ah ay ahayd oo ay tahay qulqulka Gacanka.
Waa maxay astaamaha jireed ee uu leeyahay Badda Sargasso? Marka hore malaha dabaylo badeed ama mawjado Iyo kaalinta labaad algae iyo plankton badan. Waxaan horey u sheegnay in algae ay sameyso keymo run ah oo hanan kara dhamaan dusha sare ee biyaha, kuwaas oo lagu daray maqnaanshaha dabaylahaWaxay noqon kartaa wax laga xumaado kuwa shiraaca. Waxaa jira durdurro dhinacyada ah, hareeraha, laakiin waxay isku dhexmarayaan si macno leh oo sababaya in biyaha gudaha u dhaqaaqaan wareegyada isku xidhka ah ee jihada saacad u socota.
Bartamaha wareegyadaani malaha wax dhaqdhaqaaq muuqda ah waana xasilloonaan sare. Caanka caanka ah ee "chicha calm" oo ay ka baqeen badmaaxyadii hore. Hirarka ku xeerani waa kuwo ka yar ama ka yar biyo diirran waxayna ka gudbaan biyo qoto dheer, cufan oo qabow.
Xaaladdan, biyaha leh cufnaanta kaladuwan, ayaa ah waxa ka dhigaya looxanka cuna nitrate-ka iyo fosfoorasyada inay xukumaan dusha sare ee biyaha, halkaasoo qorraxdu u timaaddo. laakiin isla mar ahaantaana, waxay hubisaa in biyahani aysan ku dhex milmin biyaha qabow ee ka hooseeya ee ma beddeli karaan cusbada ay lumiyaan.
Sidaa awgeed si adag nolol xayawaan ahi kuma jirto badda Sargasso. Waxaa jira 10 nooc oo algae ah oo dhammaad leh, sida goosgooska Latreutes, sargassensis anemone, Lithiopa snail ama diyaaradaha dabbaasha. Kama baaqi karno in aan sheegno in aaggu uu muhiimad weyn u leeyahay dhowr nooc oo cirroolo ah oo halkan ku dhashay, qaar ka mid ah nibiriyada badda ama digaagga. Hadal kooban waa goob taran, guuritaan iyo quudin.
Dhinaca kale roob badan kuma da'o, markaa uumi bax badan ayaa ka badan imaatinka biyaha. Marka la soo koobo waa bad leh cusbada sare iyo nafaqooyin aad u yar. Waxay u dhigmi laheyd lamadegaanka badda ku jira. Waxay leedahay xaddidaadyo is bedbeddela oo isla sidaas oo kale waxay ku dhacdaa qoto dheerkeeda, taas oo ka diiwaan gashan qiyaastii 150 mitir meelaha qaarkood laakiin waxay gaaraysaa 7 kun oo kale.
Laakiin sidee bay ku samaysan karaan baddaas badhtamaha Badweynta Atlaantik? SWaxaa lagu sameeyay geeddi-socodyada juquraafiyeed ee ka dhacay qolof badeed aan sii jirin, Tethys. Xusuusnow Pangea-ka supercontent? Waa hagaag, dildilaac ku dhex yaal, oo u dhexeeya qaaradaha hadda jira ee Afrika iyo Waqooyiga Ameerika, ayaa sameeyay meel ay ku dhammaadaan biyaha ka yimaada Tethys, iyagoo ka dhigaya qayb ka mid ah Waqooyiga Badweynta Waqooyiga ee hadda jirta. Tani way orday in ka badan 100 milyan oo sano ka hor.
Markii dambe, markii uu Goondwana ku jabay Badweynta Dhexe, Koonfurta Atlaantik ayaa dhalatay. Intii lagu jiray Cenozoic Era, baddu waxay ballaarisay xuduudaheeda jasiiradaha meel walba ku yaalliinna waxay ka mid yihiin firfircoonida fulkaanaha ee ku sifoobay nolosha dhulka.
Ugu dambeyntii, Ma jirtaa wax khatar ku ah Badda Sargasso? Ninka, malaha? Xaqiiqdii waad heshay Qaabkeenna horumarinta dhaqaalaha ee ku saleysan wax soo saarka joogtada ah ee badeecadaha iyo isticmaalka ayaa soo saaraya Basura waana qashinka, si sax ah, oo khatar ku ah badda. Wasakheynta kiimikooyinka, qashinka caagga ah iyo xitaa doonyaha sida fudud u socda ayaa si weyn u carqaladeeya nidaamka deegaanka ee Badda Sargasso. Xitaa ka maqnaanshaha xeebaha qaaradaha.
Nasiib wanaag sanadkii 2014 ayaa la saxeexay Bayaanka Hamilton inta u dhexeysa Boqortooyada Ingiriiska, Monaco, Mareykanka, Jasiiradaha Azores iyo Bermuda si loo ilaaliyo, laakiin… weli waa la arki doonaa haddii si dhab ah loo sameeyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » Badda Sargasso, oo ah bad aan xeeb lahayn